I-LG G5 vs LG G4, ngabe kukhona okunye ngaphandle kwamamojula? | Izindaba zamagajethi
Emahoreni ambalwa adlule, kwethulwe ngokusemthethweni i-LG G5, i-terminal yakamuva evela enkampanini esezingeni eliphezulu kanye nomlandeli we-LG G4, i-terminal yakudala ephezulu evela enkampanini ye-LG. Futhi manje njengoba sesimazi, umbuzo awunakugwemeka Ingabe i-LG G5 ingumlandeli we-LG G4 ngempela?
Okokuqala kuzodingeka uhlukanise izinto nezinto ukufanisa womabili amatheminali. Ngakho-ke kusobala ukuthi Abangane be-LG namandla we-LG G5 modular kufanele sikubeke eceleni okwesikhashana lapho siqhathanisa ne-terminal endala, kepha ngaphandle kokungabaza, uma womabili amatheminali elingana kakhulu, isici se-modular sizodlala indima enkulu kukho konke lokhu.
9 Iziphetho mayelana ne-LG G5 ne-LG G4
Umseshi I-Snapdragon 808 ku-1.92 GHZ I-Snapdragon 820 ku-2.2 Ghz
Ram I-3 Gb 4 GB
Isikrini «IPS 5 Amasentimitha ama-5 538 dpi » «IPS 5 Amasentimitha ama-3 554 dpi »
Isitoreji sangaphakathi 32 Gb + MicroSD 32 Gb + MicroSD
Ibhetri 3.000 mah 2.800 mah
OS I-Android 5.1 (ingashintshwa ngeCyanogenMod) I-Android 6.0
Conectividad "Wifi bluetooth I-4G (300 mbps) I-NFC » "Wifi bluetooth I-4G (600 mbps) I-NFC »
Ikhamela «16 MP 8 ILUNGU LEPHALAMENDE Ama-LED amabili f / 2 " » 16 ILUNGU LEPHALAMENDE 8 ILUNGU LEPHALAMENDE Ama-LED amabili f / 2 "
Intengo I-380 Euros Ama-euro angama-650?
Idizayini ihlale idlala indima enkulu kuma-Smartphones, hhayi ngama-aesthetics kuphela kepha futhi nangokusebenziseka. Okwamanje i-LG G5 isishintshile isikhumba kanye nepulasitiki kuqeda ngophetho lwensimbi ngemibala, okuthile okuyisisekelo kepha okuheha abantu ngokulingana futhi kungenzeka kube lusizo uma i-terminal inezinkinga zokushisa ngokweqile. Izilinganiso ze-LG G5 entsha zingu-149,4 x 73,9 x 7,7 millimeters futhi inesisindo esingu-159 gram. Ngenkathi i-LG G4 ilinganisa u-148,9 x 76,1 x 9,8 mm isisindo sayo siyi-155 gram.
Kulezi zici singakusho lokho ophumelele yi-LG G5.
Isikrini siba yinto enhle lapho kukhethwa i-smartphone futhi i-LG iyayazi. I-LG G5 yakhe entsha inikezwe isikrini esinezilinganiso eziphansi kepha ukulungiswa okuningi nge-pixel ngayinye. Ukulungiswa kwesikrini kungamaphikseli angama-2.560 x 1440, ngokumangazayo kuyisinqumo esifanayo se-LG G4, kepha ngokungafani nemodeli entsha, i-LG G4 inesikrini esingu-5,5-intshi, okuthile okuzoqashelwa, ikakhulukazi labo abafuna isikrini esikhulu.
Kulokhu singakusho lokho ophumelele yi-LG G4.
Uma isikrini sibalulekile, imoto eyigudlulayo iba ngaphezulu kakhulu. Kwesinye isikhathi ukwehluleka kulokhu kubangela ama-lags enza ukuthi abasebenzisi banganciki kuselula ethile. Kulokhu i I-LG igqoke iSnapdragon 820 enkulu lokho akuthembisi kuphela amandla amakhulu kepha futhi nokusebenza okukhulu nokusetshenziswa kwamandla okuphansi. Ngenkathi i-LG G4 ithwala abadumile futhi snapdragon ozondwayo 808, sithi siyazondwa ngoba yize inikeza amandla amakhulu, iprosesa inesiphazamisi esidala ukuthi sishise kakhulu, sithinta ukusebenza kwe-smartphone yonke. Uma sifuna ngenkani lokhu kuyinkinga, uma singenjalo akufanele singesabi. Ngaphandle kwe- I-LG G5 ine-4 Gb yememori yenqama ngenkathi I-LG G4 ine-3 Gb yememoriIzibalo ezingacabangi zanoma imuphi umsebenzisi.
Iprosesa ye-Snapdragon 820 ayisaziwa futhi abaningi abalokothi bayazise, ​​esimweni sethu ngicabanga ukuthi ushintsho luzolifanele ngakho-ke ngicabanga i-LG G5 ingumnqobi kulokhu.
Kuleli qophelo singasho ukuthi womabili ama-terminal kanye namanye awashintshanga lutho. Uma kuliqiniso lokho Ijubane le-4G liphakeme ku-LG G5 kune-G4 kepha lokhu kungenxa, phakathi kwezinye izinto, kwi-Snapdragon 820 entsha, iprosesa esingazi kakhulu ngayo futhi lejubane eliphakeme lingadala ukushisa okukhulu. Asazi, nokho kufanele kuthiwe ekuxhumekeni kwe-LG G5 kuyasiza kakhulu kune-LG G4, ngenxa yabangane bayo be-LG.
Kulesi sici singakusho lokho ophumelele yi-LG G4 njengoba kulindelwe ushintsho ku-LG G5 entsha futhi bekungekho.
Lokhu kungenye yamaphoyinti athakazelisa kakhulu futhi ahlaba umxhwele ama-smartphone. Esimweni esinjalo i-LG G5 inebhethri elingu-2.800 mAh kodwa ngohlelo lokusebenza olulungiselelwe kahle oluzokwenza amahora afanayo ne-LG G4. Esikhundleni salokho i-LG G4 inebhethri elikhudlwana, ibhethri le-3.000 mAh. Uma sibheka ukuthi i-LG G4 ine-CyanogenMod futhi iyathuthukiselwa ku-Android 6, singasho ukuthi ukuzimela kwe-G4 kukhulu kune-LG G5. Kepha ungakhohlwa ukuthi i-LG G5 i-modular futhi ungashintsha ibhethri nge-amperage ephakeme yize ingakatholakali.
Kulokhu ophumelele yi-LG G4 ngesizathu esifanayo nasendaweni yokuXhuma. Ibhethri elikhudlwana belilindelwe kumodeli entsha, kanye nokunye okushintshwa kwebhethri ngama-amperages ahlukile, kepha akukho lutho olusaphumile okwamanje. Ngaphezu kwalokho, akumele sikhohlwe ukuthi isikrini se-LG G4 sikhulu kunaleso se-G5, ngakho-ke ukusebenza nokusebenza kuphakeme kakhulu ku-G4 kune-G5.
Amakhamera womabili amadivayisi acishe afane ephepheni, kodwa kuyiqiniso ukuthi ku-LG G5 ikhamera ayisiyikhwalithi engcono kuphela kepha ukuqoshwa kwevidiyo ye-HD kuphakeme kune-G4. Ngenkathi imodeli endala iqopha kuze kufike kuma-fps angama-60, imodeli entsha iqopha kuma-fps ayi-120. Futhi akumele sikhohlwe ilensi nge-engeli engu-135º eyenza imifanekiso yezwe, njll. Ibe nesinqumo esingcono nobubanzi obukhulu. Futhi sesivele sinezinsiza zokuthwebula izithombe ze-LG G5, iphuzu elihle esivuna ngalo noma ngabe asizukuzithenga noma sizisebenzise.
Mayelana nalokhu, ngicabanga owinile omkhulu yi-LG G5, hhayi kuphela ngamandla alo kulokhu kodwa nangenxa yamathuba ayo esikhathi esizayo, into engenayo ikhamera ye-LG G4.
Mayelana nalokhu asikwazi ukusho okuningi, kepha kunamahemuhemu okuthi i-LG G5 izokhishwa ngentengo yama-euro ayizi-650 iyunithi ngayinye ngenkathi i-LG G4 ibiza ngama-euro angama-500 noma ungayithola ngokuncane. Akusho ukuthi inqobo nje uma lokhu kungalungiseki, ukungabaza kuhlala kunjalo, kodwa ngokwami ​​ngikholelwa ukuthi amanani azohlala futhi i-LG G5 izobiza kakhulu kune-G4. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi ophumelele kulokhu yi-LG G4.
Iziphetho mayelana ne-LG G5 ne-LG G4
Ngaphandle kokusho ukuthi owinile kuzoba nguyena esikhetha yena, kepha uma ngibheka isici nesici ngingasho ukuthi ophumelele yi-LG G4. Yebo yi-smartphone endala, kepha kulindeleke okuningi kusuka kumodeli entsha. Yini enye Intengo ephezulu yesiginali entsha yinto eyenza kube nzima kakhulu uma uyiqhathanisa ne-LG G4. Ngingakhetha i-LG G4 uma singasebenzisi kakhulu, okungukuthi, uma singewona ama-gamers kakhulu, uma siphikisana nalokho esiyikho, i-LG G5 noma ithebhulethi kungaba yizinketho ezingcono. Futhi-ke, uma sithanda amathoyizi, i-LG G5 iyindawo yethu yokugcina ngoba amathoyizi we-terminal entsha maningi futhi ngicabanga ukuthi kusekuningi okuzayo, ngakho-ke amahora wokuhlola nokuhlola amagajethi amasha ngeke aphele. Lokhu kube yiziphetho zami ngalezi zitimela ezimbili ezintsha, kepha Ucabangani? Ingabe uyayithanda i-LG G5 noma ucabanga ukuthi i-LG G4 ingcono?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » I-LG G5 vs LG G4, ngabe kukhona okunye ngaphandle kwamamojula?
Ukulinda sekuphelile, i-Samsung Galaxy S7 manje isemthethweni